Caustic Soda, Caustic Soda Flakes, Soda Ash, Sodium Sulfide, PVC Resin - Jiahengyuan
Voahangy vita amin'ny soda
Caustic soda mafy
Caustic soda rano
Kalsioma karbida 295L / kg
Glacial acetic asidra
Soda lavenona fahazavana
Soda lavenona mikitroka
Faha-3 antoko fanaraha-maso
ny Quality tsara mifanentana Amin'ny Our Price
Quanlity manome antoka
Refund Mondy Raha Bad Quality
Professional Team Service amin'ny alalan'ny
fanompoana By Professional Team
21 taona famokarana traikefa
10 taona Fanondranana Experience
Ny fiangonana, dia ny mihazona JiaHengYuan dia NaMei simika Co., Ltd. NaMei simika Co., Ltd tamin'ny voalohany naorina tamin'ny 1998. specializes amin'ny orinasa mpamokatra entana izahay sy ny famatsiana Caustic soda, ary ankehitriny dia efa tonga iray amin'ireo zava-dehibe indrindra caustic soda mpamatsy in avaratr'i Shina.
caustic soda vato soa
SLS 92% 94% sodium lauryl sulfate K12 vovoka ...
Ethyl toaka 96% 99% sy IPA 99%
Fitsaboana rano Alunimium Sulphate
PVC RESIN AO AMIN'NY PASY
Nitohy nilatsaka ny ho avy PVC, nitondra ny toerana hianjera. Amin'ny lafiny ivelany, noho ny fihenan'ny tsenan'ny solika sy ny fiantraikan'ny tranga fahasalamam-bahoaka any ivelany farany teo, nihena be ny fangatahana PVC, ...
Ny sianida sôdiôma dia fitambarana tsy misy fotony, matevina tsy voavahan'ny rano fotsy izy io. Ny cyanide dia manana firaiketam-po be amin'ny metaly, noho izany ity sira ity dia misy poizina be. Mora esorina, miaraka amin'ny fofona amandy mangidy. Soluble in wate ...
Voakasiky ny fikojakojana afovoan'ny orinasa, ny vidin'ny asidra acetic anatiny dia niakatra vetivety teo am-piandohana, fiakarana 50 / taonina, fa ny tsena ankehitriny kosa dia mbola mampiseho ny toe-javatra ivoahan'ny ...
NY MARKET an'ny HYDROGEN PEROXIDE
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nifangaro ny fanatanterahana ny tsenan'ny hidrozenina peroxyde. Ny avaratra dia nisesisesy, ary ny atsimo niandry izay hahavitana azy. Ny vaovao momba ny famatsiana sy ny fangatahana dia nifantoka kokoa. Caprolacta ...
SODA ASH MAZAVA SODA ASH DENSE
Ny vidin'ny lavenona soda ao an-trano dia miorina amin'ny herinandro ity. Miorina amin'ny fananana ny hantsana any ambany, ary ny fifanakalozana tena izy no miovaova kokoa. Andrasana ny fanitsiana ny vidin'ny lavenona soda ao ...
Address: No.1023, 10F, Bldg B, HOPSON Junjing Square, Hangyun 1 lalana, TEDA, 300457 Tianjin, Shina.
© Copyright - 2018-2022: Voatahiry ny Zo rehetra.